Visa fepetra takiana ho an'ny olom-pirenena Shinoa - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Visa fepetra takiana ho an'ny olom-pirenena Shinoa dia ara-panjakana teny famerana napetraka eo amin'ny olom-pirenena ao Shina ny manampahefana ny firenena hafaToy ny Martsa, fanavaozam-baovao Shinoa ny olom-pirenena efa visa maimaim-poana na fahazoan-dàlana amin'ny fahatongavany fahazoana firenena sy faritany, ambony ny Shinoa pasipaoro th eo amin'ny travel ny fahafahana araka ny Henley Pasipaoro Index. Talohan'ny febroary, ny fifindra-monina Shinoa manampahefana tsy amin'ny ankapobeny hamela ny olom-pirenena ao shina tanibe ny birao sidina mivoaka nefa tsy manan-kery ny fahazoan-dàlana ho an'ny amin'ny toerana firenena, na raha toa ka ny toerana firenena nahazo visa amin'ny fahatongavan'ny Sinoa pasipaoro mpihazona, raha tsy ny fivoahana nankatoavina Minisitry ny Filaminam-Bahoaka. Ankoatra ny tranga miavaka dia azo atao raha toa ny mpandeha nisy fahatelo firenena ny visa sy ny zotra mampifandray avy ny toerana voalohany-firenena ny firenena fahatelo. Toy ny jona hatao ny taona, vaovao raha toa ka ny toerana dia ny visa-on-tonga, na e-visa namoaka firenena izany fankatoavana izany dia tsy ilaina intsony. Visa fepetra takiana ho an'ny olom-pirenena Shinoa efa nanainga ny amin'ny Micronesia amin'ny valo ambin'ny folo volana desambra, any Bahamas ao amin'ny roambinifololahy Feb, Indonezia amin'ny, Grenada amin'ny folo Jun, Ekoatera tamin'ny iray volana Martsa, Maraoka tamin'ny iray volana jona, Tonga tao amin'ny sivy ambin'ny folo volana aogositra, olo-Masina Kitts sy Nevis amin'ny iray volana janoary taona, Serbia amin'ny dimy ambin'ny folo janoary taona, Tonizia tamin'ny dimy ambin'ny folo volana febroary ny taona, Barbados amin'ny iray volana jona hatao ny taona, Emirà Arabo Mitambatra eo amin'ny enina ambin'ny folo janoary taona, Bosnia sy Herzegovina amin'ny sivy amby roapolo Mety taona, British Virgin Islands amin'ny dimy volana jolay amin'ny taona, St Lucia amin'ny valo ambin'ny folo volana jolay amin'ny taona, Belarosia amin'ny folo volana aogositra taona, Qatar tamin'ny iraika amby roapolo Desambra amin'ny taona. Ny visa eo tonga dia nampidirina avy any Azerbaijan tamin'ny iray volana febroary, Brunei amin'ny telo amby roa-polo Mety, Okraina amin'ny iray volana oktobra any Armenia, tamin'ny folo volana novambra, Sao Tome sy Principe amin'ny dimy volana aprily izay hatao ny taona, Qatar tamin'ny roa amby roa-polo tamin'ny volana jona hatao ny taona, Gabon tamin'ny roa ambin'ny folo volana oktobra taona, Rwanda tamin'ny iray volana janoary amin'ny taona, Benin eo amin'ny dimy ambin'ny folo volana Martsa amin'ny taona, Zimbabwe iray volana jolay amin'ny taona ary Myanmar tamin'ny iray volana oktobra taona. Olom-pirenena shinoa natao afaka eVisas avy any India amin'ny telo-polo volana jolay, Lesotho tamin'ny iray Mety hatao ny taona, Djibouti tamin'ny valo ambin'ny folo volana febroary, Oman amin'ny fito Mety amin'ny taona ary Uzbekistan amin'ny dimy ambin'ny folo amin'ny volana jolay amin'ny taona. Mpihazona ny APEC ny Raharaham-barotra Karatra Travel (ABTC) dia lavitra eo amin'ny raharaham-barotra tsy mila visa ny firenena manaraka ireto: Ao ny tsy fisian'ny manokana roa momba ny fifanarahana, any amin'ny firenena mitaky ny pasipaoro ho manan-kery farafahakeliny enina volana eo am-pahatongavana ahitana Afghanistan, Alzeria, Anguilla, Bahrain, Bhutan, Botswana, British Virgin Islands, Brunei, Kambodza, Cameroun, Cap-Vert, Nosy Cayman, ny Repoblikan'i Afrika Afovoany, Chad, Kaomoro, Costa Rica, Côte D'ivoire, Curaçao, Ekoatera, Ejipta, El Salvador, Equatorial Guinea, Fiji, Gabon, Guinée Bissau, Guyana, Haiti, Indonezia, Iran, Iraq, Isiraely, Jordana, Kenya, Kiribati, Koety, Laos, Madagasikara, Malezia, Maldives, Marshall Islands, Mongolia, Myanmar, Namibia, Any Nepal, Nikaragoa, Nizeria, Oman, Palau, Papoazia New Guinea, Filipina, Rwanda, Samoa, Arabia Saodita, Singapore, Nosy Solomon, Somalia, Sri Lanka, Sodàna, Sorinàma, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Oganda, Emirà Arabo Mitambatra, Arzantina, Venezoela, ary Vietnam. Firenena mitaky ny pasipaoro miaraka amin'ny filazana marina ataon ny, fara fahakeliny, ny telo volana, mihoatra ny daty natao lasa dia ahitana ny Vondrona Eoropeana ny firenena (afa-tsy ny Repoblikan'i Irlandy sy ny United Kingdom) Islandy, Liechtenstein, Norvezy, Arzantina (ny rehetra afa-tsy natao ho an'ny EEA sy ny olom-pirenena Soisa). Azerbaijan, Bosnia sy Herzegovina, Montenegro, Nauru, Moldavia, ary Nouvelle-Zélande mitaky ihany koa ny telo volana kery mihoatra noho ny daty ny mpitondra ny natao lasa. Firenena mitaky ny pasipaoro manan-kery farafahakeliny telo volana kery eo am-pahatongavana ahitana Albania, Honduras, Avaratra Makedonia, Panama, Qatar, ary Senegal. Firenena izay mitaky ny pasipaoro filazana marina ataon ny iray, fara fahakeliny, - bolana mihoatra ny daty natao lasa ahitana Eritrea, Hong Kong, Libanona, Makaô, ary Afrika Atsimo. Hafa firenena mitaky na pasipaoro manan-kery eo amin'ny fahatongavany na ny pasipaoro manan-kery mandritra ny fe-potoana natao hijanona. Ny sasany amin'ireo firenena roa tonta ny fifanarahana amin'ny firenena hafa mba hanafohezany ny vanim-potoana ny pasipaoro teny ilaina ho an'ny tsirairay ny olom-pirenena na hanaiky pasipaoro fa efa lany andro (fa tsy nofoanana). firenena Maro mitaky ny isa kely indrindra ny fotsy pejy ao amin'ny pasipaoro ho aseho, amin'ny ankapobeny iray na roa pejy. Fankatoavana ny pejy, izay matetika miseho taorian'ny visa pejy, dia tsy isaina ho toy ny misy. Firenena Afrikana maro, anisan'izany ny Angola, Bénin, Burkina Faso, Kamerona, ny Repoblikan'i Afrika Afovoany, Chad, Repoblika Demokratikan'i Kongo, Repoblikan'i Congo, Côte D'ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Maoritania, Niger, Rwanda, São Tomé sy Príncipe, Senegal, Sierra Leone, i Oganda ary i Zambia, mitaky ny rehetra narahi-ny mpandeha manana Iraisam-pirenena amin'izao fotoana Taratasy fanamarinana ny Vaksiny. Ny sasany amin'ireo firenena hafa dia mitaky amin'ny vaksiny afa-tsy raha toa ny mpandeha iray avy any amin'ny faritra marary na efa nitsidika ny iray vao haingana. Koety, Libanona, Libya, Arabia Saodita, Sodàna, Syria, sy Yemen tsy mamela hiditra ny olona miaraka amin'ny pasipaoro hajia avy any Israely, na manana pasipaoro manana na ampiasaina na ny tsy ampiasaina Israeliana visa, na aiza misy porofo teo aloha handeha ny Israely toy ny fidirana na fivoahana hajia avy amin'ny mpifanolo-bodirindrina sisintany lahatsoratra ao transit firenena toy ny Jordana sy Ejipta.
Mba hialàna izany Ligy Arabo ankivy ny Isiraely, ny Isiraeliana, ny fifindra-monina asa ankehitriny ny ankamaroany dia nitsahatra ny hajia teratany vahiny ny' pasipaoro na ny fidirana na fivoahana avy ny Isiraely.
Hatramin'ny dimy ambin'ny folo janoary, ny Isiraely intsony hajia pasipaoro vahiny ny amin'ny Ben Gurion seranam-Piaramanidina, manome mpandeha ny karatra fa tsy mivaky hoe: 'Hatramin'ny janoary ny mpanamory tetika efa nampidirina izay mpitsidika no nomena teny karatra fa tsy ny teny hajia amin'ny fahatongavany. Ianao tokony hitandrina ity karatra miaraka amin'ny pasipaoro mandra-miala.
Izany no porofo ny ara-dalàna teny an-i Israely sy ny mety ho ilaina, indrindra indrindra na oviana na miampita hevitra ho Nibodo ny Faritra Palestiniana.
Pasipaoro mbola (toy ny jona, taona update) nanorotoro amin'ny Erez rehefa mandeha any, ary avy any Gaza. Koa, ny pasipaoro dia mbola nanorotoro (toy ny jona, taona update) tao amin'ny Lohasahan'i Jordana Sheikh Hussein sy Yitzhak Rabin Arava tany amin'ny sisintany Jordana. Iran tsy mety fieken-keloka ny mpihazona ny pasipaoro misy ny Israeliana visa na ny fitomboka izay latsaky ny roa ambin'ny folo volana. Noho ny toetry ny ady misy eo amin'ny Armenia sy Azerbaijan, ny governemanta ao Azerbaijan tsy mandrara ny fidiran'ny olom-pirenena avy any Armenia ihany, fa ny olom-pirenena rehetra sy ny olom-pirenena hafa firenena izay avy aminà fianakaviana armeniana, ny Repoblika Azerbaijan (na dia efa nisy ny maningana, indrindra fa ho an'ny Armenia ny fandraisana anjara amin'ny Eoropeana amin'ny Lalao natao tany Azerbaijan). Azerbaijan ihany koa dia mandrara tanteraka fitsidihana nataon'ny vahiny ny olom-pirenena any amin'ny faritra mpisintaka Nagorno-Karabakh (de facto tsy miankina Repoblika Artsakh), ny manodidina ny faritra, ary ny Azerbaijani exclaves ny Karki, Yuxarı Əskipara, Barxudarlı, ary Sofulu izay de jure ampahany Azerbaijan fa eo ambany fanaraha-maso any Armenia, raha tsy misy ny fanekena mialoha avy amin'ny governemanta Azerbaïdjan. Teratany vahiny izay miditra ireo faritany dia ho tanteraka voarara tsy hiditra ao amin'ny Repoblikan'i Azerbaijan ary dia ho tafiditra ao ny 'lisitry ny personae non gratae'. Ny fangatahana voarainy, ny manampahefana ny tena tsy fantatra ny Repoblika Artsakh mety mampiditra ny visa sy ny na ny hajia ny misaraka tapa-taratasy mba tsy ho tratra ny travel ny firenena.
Firenena sasany (ohatra: Aostralia, Kanada, Fiji, Nouvelle-Zélande, ary Etazonia) zatra handà ny fidirana ho tsy olom-pirenena, izay manana heloka an-tsoratra.
Ny fitondrana ny firenena dia afaka manambara ny diplaomaty vahiny tsy mahare, ny fandraràna ny fidirana ao amin'io firenena io. Ao ny tsy fampiasana ara-diplaomatika, ny manampahefana ao amin'ny firenena dia mety ihany koa ny manambara ny vahiny vahiny tsy mahare maharitra na vetivety, matetika noho ny tsy ara-dalàna ny asa. Miezaka miditra ao Gaza amin'ny ranomasina dia mety hisarika ny taona fandraràna tsy hiditra ao Isiraely. tao ambadika ilaina firenena Maro fe-potoana izay mpandeha rehetra, na ny vahiny rehetra mpandeha, ho fingerprinted amin'ny fahatongavana sy handà ny fieken-keloka, na fisamborana ireo mpandeha izay tsy manaiky. Any amin'ny firenena sasany, toa an'i Etazonia, izany dia mety mampihatra na dia ny fitaterana mpandeha izay fotsiny maniry ny manova haingana fiaramanidina fa tsy handeha landside. Fingerprinting firenena ahitana Afghanistan, Arzantina, Brunei, Kambodza, Shina, Etiopia, Ghana, India, Japana, Malezia amin ny teny sy ny nandehanany, Paraguay, Arabia Saodita, Singapore, Korea Atsimo, sy Taiwan. Ankoatra izany, ny Emira Arabo Mitambatra no mitarika ny iris mitily amin'ny mpitsidika izay mila ny hangataka visa. iray Zaratany Britanika Ampitan-dranomasina roa Misokatra sisin-tany amin'ny Faritra Schengen.
telo Rosia dia transcontinental firenena any Eoropa Atsinanana sy Avaratra Atsinanana.
Ny ankamaroan'ny mponina ao aminy mipetraka any Eoropa Rosia. efatra Torkia dia transcontinental firenena any Afovoany Atsinanana ary Eoropa Atsimo atsinanana. Manana ny ampahany kely ao amin'ny faritaniny ao Eoropa Atsimo atsinanana antsoina hoe tiorka Thrace. dimy Abkhazia, Azerbaijan, Georgia, sy Atsimo Ossetia dia matetika raisina ho toy transcontinental firenena. Samy manana ny ampahany vitsy tamin ny faritany ny any ny Eoropeana ny ampahany amin'ny Kaokazy. enina Kazakhstan dia transcontinental firenena Dia ampahany kely ny tany any andrefan ny Urals any Atsinanan'i Eoropa. fito Armenia, Artsakh, Sipra, ary ny Avaratra Cyprus dia tanteraka tao Atsimo-andrefan'i Azia, fa ny fananana ara-tsosialy sy ara-politika ny fifandraisana amin'ny any Eoropa. valo Ejipta dia transcontinental firenena ao Afrika Avaratra sy Moyen-Orient. Efa ampahany kely amin'ny faritany ao amin'ny faritra Afovoany Atsinanana antsoina hoe saikanosin'i Sinai. sivy Ampahany ekena. iray Zaratany Britanika Ampitan-dranomasina roa Misokatra sisin-tany amin'ny Faritra Schengen. telo Rosia dia transcontinental firenena any Eoropa Atsinanana sy Avaratra Atsinanana. Ny maro an'isa amin'ny vahoaka mipetraka any Eoropa any Rosia, noho izany i Rosia manontolo no tafiditra amin'ny maha-firenena Eoropeana eto. efatra Torkia dia transcontinental firenena any Afovoany Atsinanana ary Eoropa Atsimo atsinanana. Dia ampahany amin'ny taniny ao Eoropa Atsimo atsinanana antsoina hoe tiorka Thrace. dimy Azerbaijan (Artsakh) sy ny Georgia (Abkhazia Ossetia Atsimo) dia transcontinental firenena. Samy manana anisan'ny faritany any ny Eoropeana ny ampahany amin'ny Kaokazy. enina Kazakhstan dia transcontinental firenena Manana anjara ny tany any andrefan ny Urals Renirano any Atsinanan'i Eoropa. fito Armenia sy Sipra no tanteraka tao Atsimo-andrefan'i Azia, fa ny fananana ara-tsosialy sy ara-politika ny fifandraisana amin'ny any Eoropa.
valo Ejipta dia transcontinental firenena ao Afrika Avaratra sy Moyen-Orient.
Dia ampahany amin'ny taniny ao ny Afovoany Atsinanana antsoina hoe saikanosin'i Sinai. sivy Ampahany amin'ny Sehatry ny Nouvelle-Zélande. folo Ampahany ekena iraika ambin'ny folo Unincorporated faritra Etazonia. roa ambin ny folo Anjara ny Norvezy, tsy anjara ny Faritra Schengen, misokatra manokana sisintany eo ambanin'ny sata Svalbard Fifanarahana.
telo ambin'ny folo ny Ampahany amin 'ny Fanjakan' Danemark, tsy anjara ny Faritra Schengen.
Ny mpiasa fanaraha-maso ny Vanim-potoana ao Shina